Donald Trump Oo Ku Guuleystay Doorashada Mareykanka. – Calamada.com
Donald Trump Oo Ku Guuleystay Doorashada Mareykanka.
calamada November 9, 2016 2 min read
Natiijooyinka hor dhaca ah ee kasoo baxaya doorashooyinka dalka Mareykanka ayaa sheegaya in madaxtinimada wadankaasi uu ku guulaystay Hoggaamiyaha Xisbiga Jamhuuriga Donald Trump.
Oohin iyo murugo ayaa lagasoo sheegayaa xarumaha ol olaha doorashada HILLARY CLINTON haweenayda uu qabo madaxweynihii hore ee Mareykanka una tartamaysa xisbiga Dimuquraadiga.
Inkastoo guddiga doorashada uusan wali ku dhawaaqin natiijada rasmiga ah ee doorashada hadane warbaahinta maxalliga Mareykanka iyo midda caalamiga ah ayaa sheegaysa in Trump uu ka guuleystay Clinton.
Gobollada Florida iyo mishigaan oo la filayay in Clinton codad badan ka hesho ayuu kusoo baxay Trump taasi oo quusisay rajadii ay lahaayeen taageerayaasha xisbiga Dimuquraadiga.
Dhinaca kale madaxa ol olaha Hillary Clinton ayaa xaqiijiyay in looga guulaystay doorashada islamarkaana saacadaha soo socda uu Xisbiga Dimuquraadiga uu jeedin doono khudbad muhiim ah oo ku aaddan doorashadii dhacday.
Natiijada doorashada Mareykanka ayaa ka yaabisay Malaayiin qof oo horay u saadaaliyay in Clinton ay noqon doonto madaxweynaha Mareykanka, milyuneerka Trump ayaa lagu eedeeyay in lacago dheeri ah uu u isticmaalay ol olihiisa doorashada sedaxdii maalmood ee lasoo dhaafay.
Wargeyska New York Times ayaa soo daabacay warbixin uu ku sheegayo in doorashadan ay tahay middii ugu xumeed ee soo marta dadka Mareykanka marka loo eego kala qeybsanaanta bulshada ka dhax jirta iyo Trump oo ah cunsuri si adag ula dhaqmi doona dadka siyaasadiisa kasoo horjeeda.
Shacabka Mareykanka ayaa doortay hoggaamiye cunsuri ah oo baabiâ€™in ugu goodiyay dadka muslimiinta taasi oo banaanka soo dhigaysa in dadka Mareykanka ay yihiin kuwa dhammaantood cadaw ku ah islaamka iyo muslimiinta.
Previous: Dhageyso Askarta Itoobiya Oo Lagu Weeraray Bartamaha Somali.
Next: Mujaahidiinta Al-qaacidah Oo La Wareegay Magaalo Ka Tirsan Dalka Maali.
1 thought on “Donald Trump Oo Ku Guuleystay Doorashada Mareykanka.”
AALLAAH SIDA KHAYRKA NOOGU JIRO HAKADHIGO, AAMIN, TUUG DHUUNTA WAXAA KAWANAAGSAN TUUGA MUUQDA